मानवसेवा आश्रम र जेष्ठ नागरिक ग्राम गौरवशाली परियोजना ः मन्त्री घिमिरे | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ १८:२८:३७
विराटनगर, ३० मंसिर । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले मोरङको ग्रामथानमा वन्ने मानवसेवा आश्रम, जेष्ठ नागरिक ग्राम प्रदेशको गौरवशाली आयोजना भएको बताउनु भएको छ ।
ग्रामथान गाउँपालिका ६ र ७ मा निर्माण गरिने मानवआश्रम, जेष्ठ नागरिक ग्राम र चिल्डे«न पार्कको हिजो शिलन्यास गर्दै मन्त्री घिमिरेले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले परियोजनाको निर्माणबाट ग्रामथानको मुहार फेरिनुका साथै विकास निर्माणले गति लिने दावी गर्नु भयो ।